သင်္ကြန်တွင်း အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ - For her Myanmar
သင်္ကြန်တွင်း အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲ
ဒါတွေမလုပ်ဘဲ သင်္ကြန်အပြင်ထွက်ကဲရင်တော့ အသားအရေပျက်စီးမှာ ကျိန်းသေပဲ
ယောင်းတို့ရေ … နှစ်သစ်ကူးအတာသင်္ကြန်ကလည်း လက်တစ်ကမ်းအလိုဆိုတော့ ဘယ်သွားမယ် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေ ကိုယ်စီရှိကြမယ်ထင်တယ်။ တစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲရှိတဲ့သင်္ကြန်ဆိုတော့ ပျော်ကြတာတော့ဟုတ်ပါပြီ … သင်္ကြန်ပြီးတာနဲ့ ရေစိုစို နေပူပူမှာ ကဲထားသမျှ နေတွေလောင်ပြီး အသားအရေပျက်စီးတော့မယ်ဆိုတာကော မြင်ယောင်ကြရဲ့လား ? ဒါတွေဖြစ်လာမှ အသည်းအသန် ခဲမှန်ပြီး skin care မယ့်အစား ကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် သင်္ကြန်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင် ဒီ skincare အဆင့်တွေကို လုံးဝကျော်မချသင့်ပါဘူး။
မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ တိုနာလိမ်းပြီး moisturizer ကို ခါတိုင်းထက် ပိုလိမ်းပေးပါ။ တစ်နေကုန် နေထဲ၊ ရေထဲမှာ ပျော်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာအသားအရေ မထိခိုက်အောင် ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ပါတဲ့ moisturizer တွေက ယောင်းကို တစ်နေကုန်အေးမြစေပါတယ်။
Related article >>> အသက်(၂၅)နှစ်ကျော်လာပြီဆို မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် မျက်နှာအသားအရေ ထိန်းသိမ်းနည်း (၇) ချက်
Moisturizer လိမ်းပြီးတာနဲ့ sunscreen လိမ်းရပါမယ်။ Sunscreen ကို မလိုဘူး မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်။ နေရောင်ခြည်မှာပါတဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တွေက အသားအရေကို အလွန်ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီး အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို မြန်ဆန်စေတဲ့အထိ အန္တရယ်ပေးတဲ့အပြင် အခန့်မသင့်ရင် တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်စတာတွေပါ ဖြစ်စေပါတယ်။ Sunscreen ရွေးချယ်တဲ့အခါ အသားအရေကို အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးတဲ့ SPF 30+ နဲ့ PA +++ ပါတဲ့ အမျိုးအစားတွေကို ရွေးချယ်ပေးပါ။ (အရေးအကြီးဆုံးကလည်း Sunscreen ပါပဲ)
Related article >>> နွေရာသီမှာ အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့နည်းလမ်း (၅) သွယ်
Skin care ဆိုတာနဲ့ မျက်နှာကိုပဲ ပြေးသပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို မေ့ထားတာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပါနော်။ အပြင်ထွက်ခါနီးတိုင်း လက်တစ်ဆုံးခြေတစ်ဆုံးသာ လိုးရှင်းလိမ်းသွားပါ။ မလိမ်းသွားဘဲ သင်္ကြန်ပြီးမှ အသားအရောင်ညီချင်ပါရဲ့ဆိုရင်တော့ ဘယ်သူမှ မကူမကယ်နိုင်ပါဘူး။
Related article >>> သင်္ကြန်တွင်း ရေစိုလည်းအလှမပျက်စေမယ့် ရေစိုခံမိတ်ကပ်လိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်
ကဲလို့ဝလို့ ညဘက်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်း skin care လုပ်ပြီး sheet mask မဖြစ်မနေကပ်ပေးရပါမယ်။ တစ်နေကုန် နေတွေရေတွေကြားမှာ ပင်ပန်းသွားတဲ့ အသားအရေဆဲလ်လေးတွေကို အားဖြည့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ soothing mask, hydrating mask, whitening mask စသဖြင့် ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပြီး ကပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Related article >>> သင်္ကြန်မှာ အလန်းဆုံးဖြစ်စေဖို့ ဒါတွေကို ဒီလိုဝတ်ပါ
ကဲ … ဒီလောက်ဆိုရင် ယောင်းတို့လည်း သင်္ကြန်တွင်း အသားအရေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတာ သိကြလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ယောင်းတို့ အမြဲတမ်း ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဒီထက် ပိုလှနိုင်ကြပါစေနော် …
ဒါတှမေလုပျဘဲ သွင်ျကနျအပွငျထှကျကဲရငျတော့ အသားအရပေကျြစီးမှာ ကြိနျးသပေဲ
ယောငျးတို့ရေ … နှဈသဈကူးအတာသွင်ျကနျကလညျး လကျတဈကမျးအလိုဆိုတော့ ဘယျသှားမယျ ဘာလုပျမယျဆိုတဲ့အစီအစဉျတှေ ကိုယျစီရှိကွမယျထငျတယျ။ တဈနှဈမှာတဈခါပဲရှိတဲ့သွင်ျကနျဆိုတော့ ပြျောကွတာတော့ဟုတျပါပွီ … သွင်ျကနျပွီးတာနဲ့ ရစေိုစို နပေူပူမှာ ကဲထားသမြှ နတှေလေောငျပွီး အသားအရပေကျြစီးတော့မယျဆိုတာကော မွငျယောငျကွရဲ့လား ? ဒါတှဖွေဈလာမှ အသညျးအသနျ ခဲမှနျပွီး skin care မယျ့အစား ကွိုတငျကာကှယျထားတာ ပိုကောငျးပါတယျနျော။ ဒါကွောငျ့ သွင်ျကနျအပွငျထှကျမယျဆိုရငျ ဒီ skincare အဆငျ့တှကေို လုံးဝကြျောမခသြငျ့ပါဘူး။
မကျြနှာသဈပွီးတာနဲ့ တိုနာလိမျးပွီး moisturizer ကို ခါတိုငျးထကျ ပိုလိမျးပေးပါ။ တဈနကေုနျ နထေဲ၊ ရထေဲမှာ ပြျောနမှောဖွဈတဲ့အတှကျ မကျြနှာအသားအရေ မထိခိုကျအောငျ ရဓောတျဖွညျ့ပေးဖို့လိုပါတယျနျော။ ရှားစောငျးလကျပတျပါတဲ့ moisturizer တှကေ ယောငျးကို တဈနကေုနျအေးမွစပေါတယျ။
Related article >>> အသကျ(၂၅)နှဈကြျောလာပွီဆို မဖွဈမနေ လုပျရမယျ့ မကျြနှာအသားအရေ ထိနျးသိမျးနညျး (၇) ခကျြ
Moisturizer လိမျးပွီးတာနဲ့ sunscreen လိမျးရပါမယျ။ Sunscreen ကို မလိုဘူး မထငျလိုကျပါနဲ့နျော။ နရေောငျခွညျမှာပါတဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျတှကေ အသားအရကေို အလှနျထိခိုကျပကျြစီးစနေိုငျပွီး အိုမငျးရငျ့ရျောမှုကို မွနျဆနျစတေဲ့အထိ အန်တရယျပေးတဲ့အပွငျ အခနျ့မသငျ့ရငျ တငျးတိပျ၊ မှဲ့ခွောကျစတာတှပေါ ဖွဈစပေါတယျ။ Sunscreen ရှေးခယျြတဲ့အခါ အသားအရကေို အထိရောကျဆုံးကာကှယျပေးတဲ့ SPF 30+ နဲ့ PA +++ ပါတဲ့ အမြိုးအစားတှကေို ရှေးခယျြပေးပါ။ (အရေးအကွီးဆုံးကလညျး Sunscreen ပါပဲ)
Related article >>> နှရောသီမှာ အသားအရထေိနျးသိမျးဖို့နညျးလမျး (၅) သှယျ
Skin care ဆိုတာနဲ့ မကျြနှာကိုပဲ ပွေးသပွီး ခန်ဓာကိုယျကို မထေ့ားတာမြိုးတော့ မလုပျသငျ့ပါနျော။ အပွငျထှကျခါနီးတိုငျး လကျတဈဆုံးခွတေဈဆုံးသာ လိုးရှငျးလိမျးသှားပါ။ မလိမျးသှားဘဲ သွင်ျကနျပွီးမှ အသားအရောငျညီခငျြပါရဲ့ဆိုရငျတော့ ဘယျသူမှ မကူမကယျနိုငျပါဘူး။
Related article >>> သွင်ျကနျတှငျး ရစေိုလညျးအလှမပကျြစမေယျ့ ရစေိုခံမိတျကပျလိမျးနညျးအဆငျ့ဆငျ့
ကဲလို့ဝလို့ ညဘကျအိမျပွနျရောကျရငျတော့ ပုံမှနျအတိုငျး skin care လုပျပွီး sheet mask မဖွဈမနကေပျပေးရပါမယျ။ တဈနကေုနျ နတှေရေတှေကွေားမှာ ပငျပနျးသှားတဲ့ အသားအရဆေဲလျလေးတှကေို အားဖွညျ့ပေးတဲ့အနနေဲ့ soothing mask, hydrating mask, whitening mask စသဖွငျ့ ကွိုကျနှဈသကျရာကို ရှေးခယျြပွီး ကပျပေးနိုငျပါတယျ။
Related article >>> သွင်ျကနျမှာ အလနျးဆုံးဖွဈစဖေို့ ဒါတှကေို ဒီလိုဝတျပါ
ကဲ … ဒီလောကျဆိုရငျ ယောငျးတို့လညျး သွင်ျကနျတှငျး အသားအရကေို ဘယျလိုထိနျးသိမျးရမလဲဆိုတာ သိကွလောကျပွီထငျပါတယျ။ ယောငျးတို့ အမွဲတမျး ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ ဒီထကျ ပိုလှနိုငျကွပါစနေျော …
Tags: Beauty, healthy skin, skin, skincare, step, Summer, Thingyan, tips
Stella April 4, 2019
Hnin Ei Oo August 5, 2019